Kukho ininzi enkulu yeentlobo ezahlukeneyo zeencwadi zephupha kwaye ngasinye kwisiganeko esichazweyo sijongwa kumaphuzu ahlukeneyo. Namhlanje siza kuqwalasela iziganeko ezenzeka kwiphupha malunga nezithuthi. Okokuqala, masiqonde ukuba yintoni ukuhamba kweenkcukacha ezithwala izithuthi zephupha.
Iphupha lokuthutha intombazana lithetha umzimba ococekileyo. Ukuze uqonde ukuba yiyiphi iphupha lezothutho eliphuphayo, kufuneka uhlawule ngokukodwa umbala walo. Ukuba isithuthi esiphila kuyo ephupheni, umhlophe ungumqondiso omhle. Kodwa uphawu oluhle kunabo bonke kukuthuthwa kwegolide, umbala we-silvery okanye okhanya.
Ngeentlobo, kunokwenzeka ukusabalalisa izithuthi kwiintlobo ezinjalo. I-snowmobile iyindlela yokuthutha, ephantsi kokuhamba. Ngako oko, olu phawu lwazi lubonisa ukuba usebenzisa umzimba ophelileyo. Kwizothutho ezinjalo kunokwenzeka ukuqhuba iibhayisikili, iimoto kunye neenqwelo, ezinye.
Imoto ithwala utshintsho lobomi bephupha. Oku kungaba luhambo oluhle, uhambo loshishino, uhambo kunye nokunye. Ukuba uphupha inani elikhulu leemoto, zithetha umsebenzi omtsha, kunye nokuxhalabisa okunxulumene noko, okuzisa ingxaki enengxaki kunye nokungaqiniseki. Kodwa musa ukucaphukisa, umlumbi uza kuzisa izabelo kunye neenzuzo.
Ukuba umgangatho omhle wenziwe ngeemoto ezindala, ngoko ulungele ngakumbi ukulwa neentshaba ezahlukeneyo kunye neentshaba.
Intombazana ephuphayo yokuthenga imoto entsha inokuvuyisa ngokuqalisa ibhizinisi elitsha.
Ukuba uzibonele ukuqhuba imoto entsha, oko kuza kukuzisa amathuba amatsha kunye neenjongo zinyani.
Amantombazana kufuneka akhumbule, aye emotweni kunye nomnye umhambi okanye ngaphandle. Kuba kwimeko yomntu ohambahambayo, iziganeko eziza kuzisa uzinzo kulwalamano kufuneka zilandele. Ukuba unxibelelana nomntu, ngoku ke yonke into kufuneka ishintshe.
Xa ephupha intombazana ibona yona kunye nendlela ephuma ngayo emotweni, kufuneka iqaphele ingxaki. Ukuphonswa ngaphandle kweendaba ezimbi. Qaphela kwaye ulondoloze ubomi kunye nentlalo-ntle.
Xa ubona imoto yokupaka kwisixeko esixakekileyo, ngoko iphupha lingahunyushwa njengento emfutshane kunye nexeshana kunye nabahlobo okanye abahlobo.
Ukubona intombazana ekhawuleza kakhulu ephupheni kwaye ngexesha elifanayo ibona umgca wokugqibela, inokuphathwa njengento ekhethekileyo yokulumkisa kunye nokulinda kwinqanaba lomphuphi ebomini bokwenene.
Ukuba ungowokuqala ukuza kwi-Kfinish, unokufezekisa izicwangciso zakho kwaye ushiye wonke umntu emva (iintshaba, abafuna ukugula, abaphiswano, njl).
Le ntombazana, evakalelwa kwinyoka ehamba ngeesile, umntu unokucebisa ukuba angabi nokuzinza ngokoqobo kwimpilo yangempela. Oku kuthetha ukuba ebomini bobubomi uye wazivala ukuzikhukhumeza. Ukuba ufuna ukufezekisa nayiphi na imiphumo, mamela iimbono zabanye kwaye uzame ukubheka ubomi kunye nabanye abantu kunye nawe ngokwakho kubandakanya. Funda ukujonga ingxaki.
Intombazana edlula ngokujika, iya kufuneka iphumelele umqobo omkhulu. Isithintelo siza kuvela emva koko, kodwa kufuneka uqokelele yonke imikhosi, ngaphandle koko awukwazi kunye ne-nimuravitsya.
Ladies, vuyisa. Kuphela kumaphupha ungaphupha ukuba usengozini yemoto kwaye ngelo xesha ungeke utyholelwe. Ngendlela, iphupha elinjalo lithetha isigqibo esifanelekileyo sentlanganiso okanye ukujika kwezinto eziza kunceda ukuxazulula zonke iinjongo. Kwaye ukuba yayiyimoto yangaphandle yevavaria, ubunzima bezimali obungalindelekanga abukude.
Amantombazana ahamba ngeendlela kunye nezithuthi zabo endleleni kunye nezinye izithuthi babe nobunzima bokulwa nokukhuphisana kunye nokuqinisa ukulwa nalo.
Ingqalelo ngokucokisekileyo kufuneka uthathe ukulala, apho ufumane phantsi kweemoto, uthembisa iingxaki ngezinga elikhulu, intlungu.
Lungisa iimoto - ukuphazamiseka, ukuzisa amava abuhlungu.
Ukuba nina bafazi abathandekayo, beliphupha ngesikebhe, ngoko ke nikulungele ukuba ulindele uhambo, kwaye siza kuluhlula njani ngeentlobo. Kwakhona, isikhephe sithetha ngesishukumisela amandla kunye namandla okufuneka ubonise kule ngxaki ebomini bakho.
Amantombazana amancinci, ahamba emanqeni ahamba emagqabini ngesantya esikhulu, kubalulekile ukuba sicinge ukuba oku kuthetha ukusukela umgomo ongenakufikeleleka, onokuthelekiswa nokutshatyalaliswa komqhubi. Xa ubona ephupheni nje isikebhe esintantayo emlanjeni, unokuhlangana kunye nokuhamba ngokukhawuleza kwelizwe. Ewe, ukuba usasawubetha esi sikhephe, iziganeko ezizayo ziya kukunika ezininzi iimpawu, eziya kushiya uphawu oluqinileyo kunye nomxholo wokuvuya. Ngokubanzi, umbono wekhephe uhamba ngomlambo - oko ngokwayo kuthetha ukuzonwabisa kunye nokuhamba.
Ukubona kwiphupha ekuthengeni isikebhe, esikufunayo ixesha elide, kuthetha ukuba kukho iziganeko ezingathandekiyo. Kungenxa yokuba kukho iingxaki. Kufuneka uqaphele kwaye uqaphele.
Abasetyhini abaphupha amabhasi amabini abakwazi ukusabalalisa kumaza, kufuneka ucinge ngokubhekiselele kwishishini lakho. Musa ukugijima emva kweeharu ezimbini, ii-atom aziyi kubamba enye.
Ukuthenga isikebhe esabiza kakhulu-izenzo zakho zokurhaxisa zingakubiza kakhulu. Kwaye abaxhamli banokusebenzisa ubuninzi bakho ububi kwaye bachithe idumela lakho.
Ibhasi lephupha, elizele abantu, lingathembisa ukufika ngokukhawuleza kweendwendwe. I-carpool ingaphupha ngengozi. Ukuba ubona ibhasi eyayeka kwindlela yeentaba, uya kuvuya, ngokuba intombazana enjalo isiprofeto iqikelela ukuba uhambo olumnandi. Ngaphezu koko, olo hlobo luya kuzisa umntu ochaphazelayo.
Iphupha apho intombazana ibona ibhasi lokugijima, ithetha. Ukuze ungadabuki, qwa lasela izenzo zakho nezenzo ozenzayo ngeli xesha. Esinye sezenzo singakhokelela ekuhlawuleleni kunye neengxaki.
Kwaye ukuba uya ebhasini, elo phupha liphupha malunga neqela lakho elizayo lomlingane kunye nabahlobo. Kodwa ukuhlala ngumgibeli kuphela kuthetha ukungqubana nokungaqondani phakathi kwabantu abasondeleyo. Baya kuziphatha kakubi malunga nokuziphatha kwakho.
Intombazana eqhuba ibhasi inokuthatha indawo ephakamileyo emphakathini, kodwa ukuze ungaphumeleli ithuba lakho. U-Nestoit ukwesaba iziphakamiso zabantu abangaqhelekanga kwaye ngokukhawuleza abashiye, jonga nje.
Ukuba ephusheni umqhubi wemoto walahlekelwa ukulawula ephupheni - unokuba sisisiphukuphuku kwaye awukwazi ukufihla imizwa, eya kukudonsela kwimpikiswano. Kuya kubangela ukuba igama lakho liza kuba ne-echo. Kungaba njalo intlanganiso nomntu ombi oya kukuphazamisa kwaye akunyathele kwisenzo esinqabileyo.
Ingozi ngebhasi. Ukuba uhlala nje njengombonelo wobugqwetha malunga nendlela ukuthutha kwezothutho, ngoko kwithuba elincinci lokusasaza kwiprojekthi ethile. Kuye kuye kwaye izigqibo zakho ziya kuxhomekeka ekupheleni kwabantu.
Ukuba le ntombazana yayineenqwelo zephupha, ngoko ke ineentlanga ezahlukahlukeneyo.
Kwimeko apho idiza eliphelile liphupha, uthetha ngamandla kunye nenkalipho oza kufuneka uyenze ukuze ubhekane nale meko.
Ukuqhuba inqwelo, ukuba ngumqhubi kuthetha ukuba empilweni yangempela kubalulekile ukuzibonakalisa ngesandla esingcono kwaye wenze yonke imizamo yokujongana nale meko.
Inqwelo yaphazamiseka - wena, njengentombazana okanye umntu, unokuziva unqabile ebomini bokwenene. Ngamanye amaxesha kunokubonakala ngathi awuhlangabezani nayo yonke imfuno, ukusuka kwi-chegovoznikayut complexes.
Ukubona bonke abagibeli kwicala lithetha ukunyamekela aba bantu ngobomi bokwenene. Ukuba ngelo xesha unomqhubi okanye unento enokuyenza ngokulawulwa kwendiza, ngoko unokubona indlela owenza ngayo umsebenzi wakho ngobomi boqobo.
Uyakhumbula nawuphi na umvakalelo ocacileyo ngexesha lokuhamba. Oku kunokuthetha ukuba uthathwa njani kwihlabathi.
Kulowo nalowo wethu wafika umbono. Amantombazana amaninzi asebenzisa amaphupha abo njengendlela yokwazisa iimfihlo zelizwe kwaye iminyaka iphumelele kulo mbandela. Amaphupha anikwe ukusinceda, usixwayise ngengozi, sisindise kwiinkathazo kwaye sichaze uluhlu lweziganeko ezilungileyo. Ladies, ziphulaphule, kwaye ziya kukuvula ikhefu eliyimfihlo.
Iintlanzi ezonyiweyo: indlela yokuyichaza eli phupha?
Yintoni iphupha, apho ndilahlekelwe yindandatho, isithembiso?
Ubaba ofile ufika ephupheni, yintoni le nto?
Umntwana uyafa: ukutolika kweliphupha elibi?
Yintoni iphupha eliphuphayo encwadini yephupha?
I-Salad evela eBrussels ihluma kunye nexesha lokutya
U-Nadezhda Granovskaya, owayedlule kwi-Via Gra
Umntwana kwiinyanga ezili-6: urhulumente womhla, uphuhliso olufanele ukuba lukwazi
Ngaba kuthathwa njengento ebanga yokungcatsha
Ngaba ungalala ngesini ngexesha lokukhulelwa?
Umbhali uAkunin Boris
Maxim Fadeev kwaye "wayenxile" inkwenkwe: PR okanye ...
Intlungu ejikeleze intonga - ingaba yintoni?
I-gymnastics yokuphefumula: ukuphefumula ngokupheleleyo kwe-yogis
Kulula kangakanani ukufundisa umntwana ukuba abaleke njani